Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » Khwela iNtaba iKilimanjaro ngomyalezo wethemba
Ukhenketho lokuzonwabisa • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • inkcubeko • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku
Kwiminyaka engamashumi amathandathu eyadlulayo, owayesakuba ligosa lomkhosi waseTanzania, u-Alexander Nyirenda ongasekhoyo, wakhwela kwiNtaba iKilimanjaro emva koko wamisa “iTotshi yeNkululeko” edumileyo eTanzania kwincopho yekhephu ukukhuthaza uxolo, uthando kunye nembeko kubantu baseAfrika.
Umsitho ofanayo uququzelelwa ukutsala abantu kulo lonke elaseTanzania, eAfrika, nakwihlabathi liphela.
Lo msitho uza kuba kukuhamba emva koko woyise incopho yekhephu yeNtaba iKilimanjaro kwasekuqaleni kukaDisemba walo nyaka - 2021.
Oku kuya kuhambelana nokuphawula iminyaka engama-60 yenkululeko yaseTanzania ngendlela eyenza umahluko.
Abakhweli ngeli xesha bazakuthumela umyalezo wethemba ovela ku “Roof of Africa” ukuba iTanzania kunye namanye amazwe aseAfrika akhuselekile ukuhamba ngeli xesha lokugonywa kwe-COVID-19 kusenzeka phantse kwilizwekazi liphela.
Xa iTanzania yalayita i "Freedom Torch" edumileyo kwincopho ye Intaba yaseKilimanjaro Kwiminyaka engama-60 eyadlulayo, ngokufuziselayo kwakuthetha ukuqaqamba ngaphaya kwemida kwaye emva koko kuzise ithemba kulo lonke elase-Afrika apho kwakukho ukuphelelwa lithemba, uthando apho kwakukho ubutshaba, nentlonipho apho kwakukho intiyo.
Kodwa kulo nyaka, abakhweli kwincopho yeNtaba iKilimanjaro bazothumela umyalezo wethemba lokuba iTanzania yindawo ekhuselekileyo yokundwendwela iindwendwe kwanokuba iAfrika ngoku ikhuselekile kukhenketho emva koorhulumente abaliqela kwilizwekazi bathabathe amanyathelo ngeendlela zokuthintela ubhubhane .
Imikhankaso yokutsala abantu abavela kwiindawo ezahlukeneyo zase-Afrika kunye nehlabathi ukuba boyise le ncopho iphakamileyo ye-Afrika yinxalenye yemibhiyozo yokuphawula iminyaka engama-60 yenkululeko yaseTanzania ngoDisemba 9 walo nyaka, nanjengoko ilizwe liphuma kancinci kwiimpembelelo Isifo esikho elizweni jikelele se-covid19.
Iipaki zeSizwe zaseTanzania, umgcini wolondolozo lweNtaba iKilimanjaro, ngoku usebenza ngokubambisana nezinye iinkampani zabakhenkethi ukutsala abantu ukuba babhiyozele iminyaka engama-60 yaseTanzania kwiPhahla le-Afrika.
Amanyathelo okhuseleko asendaweni, kwaye abahambi baphinde bahlangana nabathandekayo babo kwiindawo ezizodwa apho imiphefumlo yabo inqwenela ukunxibelelana.
Egqunywe yinkungu phantse yonke le mini, iNtaba iKilimanjaro, eyona ncopho iphakamileyo e-Afrika, yindawo ekhethekileyo yabakhenkethi baseTanzania, etsala malunga nama-60,000 abakhwela nyaka ngamnye.
Le ntaba imele umfanekiso weAfrika jikelele, kwaye ingqokelela yayo emide ehlanganiswe ngekhephu iyahambelana neAfrika.
Kumazwe aphesheya, umceli mngeni wokufunda, ukuphonononga, kunye nokunyuka le ntaba ingaqondakaliyo kubambe umbono wabantu kwihlabathi liphela. Kwabaninzi, ithuba lokunyuka le ntaba yinto yokonwaba ebomini.
Ngo-1961, iflegi yeTanzania esandula ukuzimela yathwalwa yanyuselwa entabeni ukuze ibhabhe kwincopho yayo emhlophe. Itotshi yenkululeko yayikhanyisiwe kwincopho yayo ukuze kuvuselelwe amaphulo omanyano, inkululeko kunye nobudlelwane.
INtaba i-Kilimanjaro ihlala iluphawu kunye neqhayiya leMpuma Afrika ngokugqama kwayo kwezokhenketho. Le ntaba iphakamileyo yase-Afrika idweliswe kwiindawo ezingama-28 zabakhenkethi ehlabathini kufanelekile ukuba ube yimidlalo yobomi bonke.
Iindwendwe ezingakwaziyo ukunyuka ziye kwincopho yazo zinokonwabela ukubukela ubuhle bayo bendalo kwiilali apho zikwazi khona ukuthatha iifoto zale ntaba yodwa.
UChris Lyle uthi:
NgoSeptemba 16, 2021 kwi-01: 34
Enkosi ngenqaku elihle, ndibuyisa iinkumbulo ezintle. Nam, ndandiphezu kweKilimanjaro olwakukhunjulwa uSuku lokuZimela lweTanganyikan kwiminyaka engama-60 eyadlulayo, ndandihamba ndibheka emazantsi esikolweni eNairobi. Ekubuyeni ibhulorho yaseNamanga yayikhukulisiwe ngamanzi kwaye saye sanyangwa sakubona uJomo Kenyatta ethwalwa phezu kwamathambo ashiyekileyo esuka emotweni kwicala laseTanganyikan ukuya kwelinye kwicala laseKenya. Xa amanzi awayo ngosuku olulandelayo sakwazi ukuziwinisa ngaphesheya kwebhedi yomlambo. Ndingavuya ukwabelana ngezikhumbuzo ngakumbi ukuba kukho umdla.